अबको १० बर्षमा नेपालको बीमा पेनिट्रेशन भारतको जस्तै हुनेछ : एलपी दास, सिइओ एलआइसी नेपाल – Insurance Khabar
अबको १० बर्षमा नेपालको बीमा पेनिट्रेशन भारतको जस्तै हुनेछ : एलपी दास, सिइओ एलआइसी नेपाल
प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ११:३०
लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले गत माघ १५ गते देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा लक्ष्मी प्रसाद दासलाई नियुक्त गरेको छ । उनी कम्पनीको नवौ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । भारतको उडिसामा जन्मेका दासले एमबिएसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । एलआईसी अफ इण्डियामा सन् १९९२ मा अधिकृतस्तरबाट जीवन बीमा सेवामा प्रवेश गरेका दासले कम्पनीको प्रशासन, आईटी, मार्केटिङ्ग लगायत प्रायः सवै विभागमा काम गरी सकेका छन् । पछिल्लो समयमा उनी एलआईसी अफ इण्डियाको भुवनेश्वरमा सिनियर डिभिजनल म्यानेजरको रुपमा कार्यरत थिए । उनै दास सँग नेपालको बीमा क्षेत्रका बिषयमा इन्स्योरेन्स खबरकर्मीले गरेको कुराकानी :भारतीय बीमा बजारमा लामो समय देखि कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपालको बीमा बजारलाई कसरी लिनु भएको छ ?
भारतको तुलनामा सानो राष्ट्र भएपनि नेपाल जीवन बीमाको लागि भर्जिनल्याण्ड देखेको छु । जनसंख्याको ठुलो हिस्सा अझै पनि जीवन बीमामा समेटिएका छैनन् । अबको १० बर्षपछि नेपालमा पनि जीवन बीमाको पेनिट्रेशन भारतको जस्तै हुनेछ । हरेक वर्ष बीमा व्यवसायको तथ्याङ्कगत बृद्धि हेर्दा नेपालीहरुमा जीवन जोखिम बहनका साथ बचत गर्ने चाहना रहेको देख्न सकिन्छ ।
भारतमा बीमा प्रति मानिसहरु सचेत छन् । तुलनात्मक रुपमा नेपाल र भारतको संस्कृति एकै खालको भए पनि नेपालमा बीमा सम्बन्धी चेतना बढ्न सकेको छैन । किन होला ?
यी सवै कुराहरु देशको शिक्षा र आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर गर्दछ । अहिले नेपालमा पनि १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरु बीमा सचेतना बृद्धि गर्न लागेको देखेको छु । यही तरिकाबाट अघि बढ्दा नेपालमा पनि बीमा सम्बन्धी चेतना बढ्नेछ । हरेक कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई राम्रो प्रशिक्षण प्रदान गरी दक्ष बनाएर मात्र वजारमा पठाउन जरुरी छ ताकी बीमाबारेमा राम्रो सन्देश समाजमा जानसक्छ । इमान्दारिता र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट सवै कम्पनीहरुले उन्नति गर्न सक्छन् । कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा योजना मात्र होइन, बीमाको जरुरतको बारेमा पनि विज्ञापन गर्नु आवश्यक छ । बीमा सचेतना प्रचारप्रसारमा नियमनकारी निकायको पनि भूमिका रहनु पर्दछ ।
बीमा कम्पनीहरुले नेपाली परिवेश अनुसारको बीमा योजना बनाउँनु भन्ने गुनासो छ । तपाईको बिचारमा कस्तो खालको बीमा योजना नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ ?
कुरा त्यसो होइन । अहिले जीवन बीमाको विविध प्रकारका योजनाहरु बजारमा आइसकेका छन् । बजारको माग अनुसार कम्पनीले बीमा योजना ल्याउँदै जाने हो । सवै ग्राहकहरुको एउटै छनौट हुन्न । उमेर, आम्दानीको श्रोत र उसको इच्छा अनुसार बीमाको योजना लिने गरिन्छ । एलआईसी नेपालमा सवै तह र तप्काका व्यक्तिहरुका लागि उपयोगी योजनाहरु छन् । हामी सँग बालबच्चाको योजना नै ४ किसिमका छन् । अन्यका लागि आजीवन बीमा, सावधिक बीमा, धनफिर्ता योजना र पेन्सन योजनाहरु लोकप्रियरुपमा विक्री भैरहेका छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई अनावश्यक सेवा सुविधा दिएको भन्दै बीमा समितिले कडाई गर्दै आएको छ । समितिको यो निर्णय कत्तिको उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ?
कुनै प्रकारको विकृति देखिएमा त्यसको निराकरण गर्नु नियमनकारी निकायको कार्य नै हो । वास्तवमा अभिकर्ताहरु भनेका जीवन बीमा कम्पनीको मेरुदण्ड नै हुन् । अभिकर्ताहरुले कम्पनीको बीमा योजनाहरुलाई ग्राहकहरुको घरदैलोमा गएर वताउने र विक्री गर्ने काम गर्दछन् । यो काम त्यति सहज छैन । अभिकर्ताहरुलाई काममा लगाउन नियमनकारी निकायले दिएको अधिकारभित्र रहेर प्रोत्सहान त गर्नै पर्छ । कुनै कम्पनीले नियमबाहिर गएर काम गरेका छन् भने त त्यसलाई रोक्नु जरुरी छ ।
जनसंख्या र बीमा कम्पनीलाई तुलना गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा अधिक बीमा कम्पनीहरु छन् । यसको प्रभाव बजारमा कस्तो रहला ?
वास्तवमा यो कुरा सही हो । भारतको क्षेत्रफल र जनसंख्या नेपालको भन्दा ठुलो छ । हाल भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा छ । यो हेर्दा तुलनात्मकरुपमा नेपालमा बढी भएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी तवरबाट कम्पनी स्थापनाको स्वीकृति प्रदान गरिनुको अर्थ बीमाको पहु“च अधिक नागरिकहरुमा पुगोस् भन्ने हुन सक्छ । धेरै कम्पनीहरु बजारमा हु“दा सकरात्मक र नकरात्मक दुबै प्रकारका प्रभाव हुन सक्छन् । कम्पनीहरुले सकरात्मक प्रभाव दिने कामहरु गर्नु पर्दछ । नकरात्मक सोच र विचार लिएर अगाडि जाने कम्पनीहरुको दीर्घकालिन स्थायित्व रहन सक्दैन । कम्पनी सफल बन्न ग्राहकको विश्वास जित्न सक्नु पर्छ । विश्वास जित्न निकै लामो समय कम्पनीले राम्रो कार्य गर्न सक्नु पर्छ ।
नेपालमा जीवन बीमा कम्पनीको संख्या दोब्बरले बढेको छ । कम्पनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा एलआईसीको बृद्धिलाई कायम गर्न के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
एलआईसी नेपालको प्रतिस्पर्धा आफैस“ग हुन्छ । हाम्रो कम्पनीले स्थापनाकाल देखि नै व्यवसायमा निरन्तरकोे बृद्धि हासिल गरिरहेको छ । हामीहरु अर्को जीवन बीमा कम्पनीलाई तल झार्नु पर्छ भन्ने मान्यता कहिले पनि लिदैनौ । हामी हाम्रा ग्राहकहरुको सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्य गर्दछौ । अहिले हामीहरुले देशभर ६१ शाखा कार्यालयमार्फत सेवा दिइरहेका छौ । निकट भविष्यमा शाखा कार्यालयको संख्या १०० पुरायाउने लक्ष्य लिएका छौ । भर्खरै हामीहरुले जीवनसाथी बीमा योजना वजारमा ल्यायौ जो ग्राहकहरुमाझ लोकप्रिय बन्न सफल भयो । अरु आकर्षक बीमा योजनाहरु पनि चाँडै वजारमा ल्याउने प्रयासमा छौ । बीमा दावीभुक्तानी कार्यलाई सरल र छिटो बनाएका छौ । कर्मचारी र अभिकर्ता प्रशिक्षणलाई हामी सधै प्राथमिकतामा राख्दछौ । हामी पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनलाई विशेष ध्यान दिन्छौ ।
नेपालमा बीमा पहुँच बढाउँनन के गर्नु पर्ला ?
बीमा खरिद गर्न रकमको आवश्यकता पर्दछ । नागरिकहरुको आयस्रोत बढ्न आवश्यक छ । सरकारी स्तरबाट आयकर छुटको दायरालाई बढाउनु जरुरी छ । बीमाको आवश्यकता र महत्वहरु विद्यालयस्तरबाटै विद्यार्थीहरुलाई सिकाइनु पर्दछ । जीवन बीमालाई बचत गर्ने उत्कृष्ट माध्यम हो भन्ने सन्देश प्रचारप्रसार गर्नु पर्दछ । बीमालाई शहरमा मात्र केन्द्रित नगरी ग्रामीण क्षेत्रमासमेत पुराईनु पर्दछ । नियमनकारी निकायले पनि बीमाको पहुँच बृद्धिका लागि योजनागत कार्यहरु ल्याउनु पर्दछ । न्युन आयस्रोत भएका नागरिकहरुलाई जीवन बीमाको दायरामा ल्याउन सकियो भने त्यो राम्रो उपलब्धि हुनेछ ।
सगरमाथा आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजनाको शुभारम्भ, सहुलियत दरमा तीन प्रकारका जोखिम बहन हुने
शेयर बजारमा लगानी गर्ने हाथवे इन्भेष्टमेन्टले ७ महिनामा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कमाउने प्रक्षेपण
इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपालको दोस्रो बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न